Café Oodade abathathu | Tyelela uHultsfred
Café Oodade abathathu
ekhaya » Yitya usele » Ikhefi » Café Oodade abathathu
I-Café Tre Systrar yindawo yokutyela encinci yasemaphandleni ephekwe ekhaya, i-organic kwaye iveliswa ekuhlaleni kugxilwe. Apha unethuba lokuthenga imisebenzi yezandla kunye nezinye izinto esizithandayo. Indawo yokutyela ibekwe kwisikolo iVrånganäs, ilitye elaliphoswa kumama wethu wobuntwana.
Sithengisa izinto ezenziwe ngezandla ezenziwe ngoboya. Apha unokufumana ezinye izityalo, amaqanda kwiinkukhu zethu, ubugcisa basekuhlaleni kunye nezinye izinto ezilungileyo.
Senza ukususela ekuqaleni, sisebenzisa uboya obusuka kwiigusha zethu, esizidayi, ikhadi, saziva, sijikeleza kwaye siluka. Sithengisa iimveliso zezikhumba zeegusha nezemvu. Izityalo zivela kulimo lwethu kwaye amaqanda siwakhetha ngqo kwizikhukukazi. Xa amaqanda anele ngaphezu kokubhaka, ayathengiswa. Ekugqibeleni, sinethemba lokunyusa uluhlu lwethu ngobugcisa obuninzi esibuxabisayo kunye nezinto esithanda ukuzitya.
NgoMvulo: KuvaliweNgoLwesibini: KuvaliweNgoLwesithathu: KuvaliweNgoLwesine: KuvaliweNgoLwesihlanu: 12-17NgoMgqibelo: KuvaliweNgeCawa kuvaliwe
Ekbacken, 577 77 UJärnforsen, Sverige
64 uphononongo kuGoogle
Ikofu elungileyo enamanqatha! Kufuneka eSmland!
Ikhefi entle kakhulu apho sihlala egadini. Isonka esihle esibhakwe ekhaya, ikofu elungileyo kunye nabasebenzi abanobuhlobo. Kufanelekile ukutyelelwa!
Ikofu elungileyo eyenziwe ekhaya kwindawo ethambileyo
5/5 9 kwiinyanga ezidlulileyo
Ihlala ihleli nje njengeFrächa emnandi kunye neempahla ezintle ezisingqongileyo
Le cafe yeyona nto intle eyenzekileyo okoko baqala ukuthengisa isonka esisikiweyo .. Indawo entle, oh yindawo entle yokutya, kunzima ukukhetha. Xa mna nenkosikazi silapho, sithenga iintlobo ezininzi kunye namacandelo. Oku kwenzelwa ngokwenyani kuwo onke amanqanaba. U-Erika kunye noodade baphumelele kule nto. Ndiyathemba ukuba unamandla, ke ayizukuba nzima kuwe. Ndikunqwenelela okuhle kodwa kwixesha elizayo. Siza ngokukhawuleza ukuba uvule kwakhona kungekudala.